• ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ဂုဏ်သတ္တိ
• ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ခြင်း
• သွေးအတွင်း အဆီဓါတ်များခြင်း
• HIV ရောဂါ၊ ညစ်ညမ်းစေတဲ့ အရာတွေကို အဆိပ်ထုတ်ခြင်း၊ အားအင်နဲ့ ကိုယ်ခံအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
BBarley မှာ အရေပြားရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ အစရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Barley နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလဲ။
• ဆီးချိုဆေး – ဆီးချိုဆေးတွေနဲ့ တွဲသောက်ခြင်းဟာ သွေးသကြားဓါတ်ကို အလွန်အကျွံ ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
• သောက်ဆေးများ – Barley မှာပါတဲ့ အမျှင်ဓါတ်ဟာ ဆေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓါက စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 49.
Barley. http://www.drugs.com/npp/barley.html. Assessed August 3, 2016.Skidmore-Roth, Linda.